थाहा खबर: 'गणतन्त्रलाई खतरा भएमा सरकारले नियन्त्रण गर्छ'
(Monday, 21 September, 2020)
'गणतन्त्रलाई खतरा भएमा सरकारले नियन्त्रण गर्छ'
सिंहदरबारमा सुनाए बघिनी र डमरुको कथा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अब कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संघीय संसदको नयाँ भवनकाे शिलान्यास कार्य्रकममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नबहकिएर विकास र समृद्धिमा लाग्‍नुपर्नेमा जाोड दिए।
'अब हामी बहकिनु हुन्‍न। राजनीतिक आन्दोलन सकिएको छ, अब विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ', ओलीले भने, 'अब भ्रष्टाचारको विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि छोडिने छ‌ैन। सरकार भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता लिएर अघि बढ्छ। अब कडा कदम चाल्ने हो, भ्रष्टाचारी कसैले बच्छु भनेर नसोचे हुन्छ।'
पछिल्लो समय गणतन्त्रमाथि खतरा भएको हल्ला चलाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो भएमा सरकार चुप लागेर नबस्‍ने चेतावनी दिए। 'केही मान्छेहरू देशलाई प्रतिगमनमा फर्काउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन्। जबसम्म डमरूमाथि खतरा हुन्‍न भन्ने लाग्छ तबसम्म बघिनी चुप बस्छ', उनले भने, 'त्यस्तै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा आयो भने सरकार चुप लागेर बस्दैन। त्यसका लागि तीव्र विकासलाई अगाडि बढाउँछौं।' उनले गणतन्त्रमाथि जोखिम भएमा सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्ने पनि बताए। 'यदि त्यस्तो भयो भने हामीले नियन्त्रणकारी भूमिका पनि खेल्नुपर्ने हुनसक्छ', उनले थपे, 'अब देशमा हिंसाको कुनै ठाउँ नै छैन। यो बिलकुल वितण्डाको बाटो मात्रै हो।'
देशले सबै राजनीतिक उपलब्धि गरिसकेकाले अब हिंसाको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए। 'हिंसामा गएर के प्राप्ति गर्ने हो? संघीयता, आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै प्राप्त भइसकेका छन्', ओलीले भने, 'हिंसा, लुटपाट र जनतालाई दु:ख दिने काम के ल्याउनका लागि हो? यो जनतालाई दुःख दिने काम सह्‍य हुँदैन।'
प्रधानमन्त्रीले हत्या हिंसा छाडेर देश विकासमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। 'कतिपयलाई चमडीको मायाले प्रतिबन्ध लगाउँदा किन यो गरेको भन्छन्, तर त्यो मानिँदैन', उनले भने, 'अब देश विकास र सुशासनको बाटोमा जान जरुरी छ। म यसका लागि सबैलाई आह्वान गर्छु। हिंसा र वितण्डा गर्छौ भन्‍ने हो भने सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।'
स्टोइनिसको हाफ सेन्चुरी, दिल्लीले दियो पञ्जाबलाई मध्यम लक्ष्य
बागलुङमा विश्‍वकै लामो झोलुंगे पुल ! रेकर्ड राख्‍ने प्रक्रिया सुरु
विदेशबाट आएकालाई सदरमुकामको क्‍वारेन्टाइनमा राखिने नियम हटाइयो
नेकपा सचिवालयको प्रस्ताव : केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मासिक तलब भत्ता!
टोटनह्‍यामको प्रभावशाली जित, सन एक्लैले गरे चार गोल
सांसद अमनलाल मोदीलाई कोरोना पुष्टि
९७००० प्रति तोला
८३१६० प्रति १० ग्राम
९६५०० प्रति तोला
८२७३० प्रति १० ग्राम
१३१५ प्रति तोला
११२७.५० प्रति १० ग्राम